China 6 oyi akwa impedance akara isiike-Flex osisi na stiffener emepụta na suppliers | Kangna
6 oyi akwa impedance akara isiike-Flex osisi na stiffener
Typedị ihe: FR-4, polyimide
Min oghere size: 0.15mm
Emechara mbadamba osisi: 1.6mm
FPC ọkpụrụkpụ: 0.25mm
Ebute ụzọ: ụbọchị iri abụọ
Ọmụmụ na mmepe nke FPC na PCB mụrụ ọhụrụ ngwaahịa nke isiike -flex osisi. Ya mere, na PCB prototyping, mgbanwe circuit board na isiike osisi na-jikọtara ọnụ dị ka mkpa na nkà na ụzụ chọrọ mgbe ịpị na usoro ndị ọzọ na-etolite a circuit iba na FPC àgwà na PCB àgwà.
Na PCB prototyping, Nchikota isiike osisi na FPC na-enye ihe ngwọta kasị mma na mmachi ohere ọnọdụ. Teknụzụ a na-enye ohere iji jikọta njikọta ngwaọrụ yana ijide n'aka na njedebe na nkwụsi ike kọntaktị, ma belata ọnụ ọgụgụ nkwụnye na njikọta.
Uru ndị ọzọ nke osisi rigid_flex bụ nkwụsi ike ma na-arụ ọrụ, na-ebute nnwere onwe imewe 3d, ntinye dị mfe, nchekwa ohere, na mmezi nke njirimara eletriki edo.
Isiike-Flex PCBs ricgha ationsgha Ngwa:
Isiike-Flex PCB na-enye ọtụtụ ngwa, sitere na site na smart ngwaọrụ gaa ekwentị na kamera dijitalụ. Na-arịwanye elu, ejirila ngwa ngwa siri ike rụọ ọrụ na ngwaọrụ ọgwụ dịka pacemakers maka ohere ha na ikike mbelata ibu. Enwere otu uru ahụ maka iji PCB eme ihe na-agbanwe agbanwe.
Na ngwaahịa ndị ahịa, ike mgbanwe anaghị eme ka ohere na ịdị arọ dịkwuo elu kama ọ na-eme ka ntụkwasị obi dịkwuo mma, na-ewepụ ọtụtụ mkpa maka nkwonkwo ọkụ na nke siri ike, nke na-emebi emebi nke na-adịkarị mfe njikọ. Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ, mana enwere ike iji PCBs siri ike rite uru na ngwa elektrọnik niile gụnyere ngwa nyocha, ngwa ọrụ na ụgbọala.
Isiike-Flex PCBs Technology na Production Usoro:
Ma na-amị a isiike flex prototype ma ọ bụ mmepụta quantities chọrọ nnukwu ọnụ ọgụgụ isiike isiike Flex PCBs fabricgha na PCB nzukọ, technology na-ọma pụtara na a pụrụ ịdabere na. Akụkụ PCB na-agbanwe agbanwe dị mma nke ukwuu iji merie ohere na nsogbu dị na ogo nke nnwere onwe.
Iji nlezianya tụlee usoro siri ike-na-agbanwe agbanwe na nyocha kwesịrị ekwesị nke nhọrọ ndị dị na mmalite nke mmalite usoro PCB siri ike ga-eweghachi nnukwu uru. The isiike-Flex PCBs fabricator ga-aka n'oge na imewe usoro iji hụ na imewe na fab òkè bụ ma na nchikota na-aza ajụjụ maka ikpeazụ ngwaahịa ọdịiche.
Usoro isiike na-agbanwe agbanwe dịkwa mgbagwoju anya ma na-eri oge karịa ịgha ụgha siri ike. All mgbanwe mmiri nke isiike-Flex nzukọ nwere kpamkpam dị iche iche njikwa, etching, na soldering Filiks karịa isiike FR4 mbadamba.
Uru nke isiike-Flex PCBs
• Enwere ike ibelata oghere chọrọ site na itinye 3D
• Site na iwepu mkpa njikọta na eriri n’otu n’otu akụkụ isiike mmadụ nwere, enwere ike ibelata mbadamba bọọdụ na oke sistemu ya.
• Site na ịbawanye ohere, enwerekarị ọnụ ọgụgụ dị ala na akụkụ.
• Ole na ole solder nkwonkwo obi sie elu njikọ pụrụ ịdabere.
• Ijikwa n'oge mgbakọ dị mfe iji tụnyere bọọdụ na-agbanwe agbanwe.
• Simplified PCB nzukọ usoro.
• Integrated ZIF kọntaktị na-enye mfe modular ihu na usoro usoro.
• Ọnọdụ ule dị mfe. Nnwale zuru ezu tupu echichi amalite.
• A na-akwụ ụgwọ ọnụahịa na mgbakọ ọnụ na iji bọọdụ siri ike-Flex.
• Ọ ga-ekwe omume iwelie mgbagwoju anya nke usoro eji arụ ọrụ, nke mekwara ka nnwere onwe kwalite nnweta nke ụlọ kacha mma.
Cihe anyị ji FPC dochie isiike osisi?
Ogwe okirikiri na-agbanwe agbanwe bara uru, mana ha agaghị edochi bọọdụ bọọdụ maka ngwa niile. Ọnụ ego dị mkpa,. Isiike osisi mbadamba dị ọnụ ala karịa imepụta ma wụnye ya na ngwa ngwa na-arụpụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
Dịka, ezigbo ihe ngwọta maka ngwaahịa na-agbanwe agbanwe bụ nke na-agbakwunye sekit na-agbanwe agbanwe mgbe ọ dị mkpa ma jiri bọọdụ sekit siri ike, nke a pụrụ ịdabere na ya ebe enwere ike ịme ka nrụpụta na mgbakọ belata.
Nke gara aga: Mkpa Polyimide gbagọrọ agbagọ FPC na FR4 stiffener
Osote: Resin ịkwụnye oghere Microvia Imikpu ọlaọcha HDI na laser egwu
ngwa ngwa multilayer High Tg Board na imikpu aga ...
ngwa-atụ n'aka prototype gold plating PCB na Coun ...
8.0W / mk elu thermal conductivity MCPCB maka El ...